आउँदा आउँदै फुटबल कोचको रवाफिलो शैलीः नो मोर डिफेन्स ! – Nepal Press
आउँदा आउँदै फुटबल कोचको रवाफिलो शैलीः नो मोर डिफेन्स !
२०७७ चैत २२ गते २१:५०
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् अब्दुल्लाह अलमुताइरी । आज एन्फाले उनलाई पत्रकारसँग चिनायो । पहिलो झलकमै उनको फरक स्वभावबारे पत्रकारले भेउ पाए ।
पत्रकारले सोधेको अर्को प्रश्न थियो, ‘अब नेपाली राष्ट्रिय टिमको खेलाडी कसरी छनाट गर्नुहुन्छ ?’ अब्दुल्लाहको उत्तर जिल्ल पार्ने थियो ।
उनले पहिले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नेपालका लागि तीन वर्षयता राष्ट्रिय टिम, अन्डर–१९ र यु २३ मा कति खेलाडीले खेले ?’
पत्रकारबाट जवाफ आएन । अनि आफैंले जवाफ दिए, ‘५१ जना ।’
उनले ती प्रत्येक खेलाडीको एक–एक रिपोर्ट आफुसँग भएको दावी गरे ।
अब्दुल्लाहले भने, ‘कसले कतिपटक बल छोए, कति ड्रिब्लिङ गरे, कति क्रस गरे, कति गोल गरे, क्रस कति गरे पास सबै रिपोर्ट मसित छ । मैले २३ खेलाडी चुज गरिसकेको छु । अब ८ खेलाडीहरुको स्थान खाली छ क्वालिफायर्सका लागि ।’
‘अब तपाईंको कार्यकालमा नेपालको खेल शैली कस्तो हुन्छ ?’ पत्रकारले सोधे ।
उनले जवाफ दिए, ‘अनेस्टली भन्नुपर्दा यदि तपाईं धेरै डराउनुभयो भने केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । कुवेतबाहिर कोच गर्दा ममाथि धेरै शंका गरिएको थियो । ३ महिनापछि फर्किन्छ भनेका थिए । तर, म जहाँ पनि सफल भएँ । एसियामा मेरो पाचौं देश हो । मैले यूरोपमा पनि सिकाएको छु ।’
‘यदि तपाईं केहीसँग पनि डराउनुभएन भने जे पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । फुटबलमा मात्र होइन जहाँ पनि यो लागू हुन्छ । धेरै डराउनुभयो भने केही गर्न सक्नुहुन्न । मलाई लाग्छ, हामीसँग केही छ । अब डराइदैन । डिफेन्स गरिदैन । नो मोर स्केयर । हामी ब्यूटीफुल र स्मार्ट फुटबल खेल्ने छौं,’ उनले भने ।
तपाईंसँग एनालिस्ट हुनुहुन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘मलाई लाग्दैन कि चाहिन्छ ।’
आफ्नो आगामी योजना सुनाउँदै उनले नेपाल सुपर लिगपछि ट्रेनिङ क्याम्प हुने बताए । २० देखि ४० दिनमा नेपाल वा कतारमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रत्येक महिना १४ देखि २१ दिन ट्रेनिङ गर्ने योजना उनले सुनाए ।
प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले फुटबल करिअरबारे पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘म गोलकिपर थिएँ । मैले नेसनल टिममा खेलेको छैन । क्लवमा खेलेको छु । एउटा क्लवमा खेल्दा खेल्दै घाइते भएँ । त्यसपछि क्लवले भन्यो कि तिम्रो उपचार गर्न सक्दिनँ घर फर्क । त्यसपछि खेलाडीका रुपमा मेरो करिअर सकियो । अनि बिहे गरेँ परिवार बनाएँ ।’
‘२०११ बाट मैले प्रशिक्षकका रुपमा काम थालेँ । पहिले कुवेतकै क्लवहरुमा प्रशिक्षण गरेँ । त्यसपछि साउदी अरेबियामा गएँ । त्यहाँबाट किर्गिस्तानमा गएँ । त्यहाँको अन्डर १६ नेसनल टिमका लागि उत्कृष्ट रिजल्ट दिएँ । अनि कतार गएँ । त्यहाँको अन्डर २३ टिमले मेरो प्रशिक्षणमा ९ खेल खेल्यो । त्यसमध्ये ४ जित, ४ बराबरी र एक मात्र हार भयो । आफ्नो टिमलाई मैले आठौंबाट चौंथो पोजिसनमा ल्याएँ ।’
उत्कृष्ट प्रशिक्षणका कारण आफूले एक वर्ष तीन महिनामै प्रो लाइसेन्स सर्टिफिकेट पाएको उनले सुनाए ।
प्रकाशित: २०७७ चैत २२ गते २१:५०